Dzvanya Kutenderera | ThatsLuck.com
Kubheja vavakidzani paroulette
Dzvanya Around iri roulette software nyowani inouya kubva mukukumbira kwevamwe vashandisi, vakatoshandisa software yacho ► Roulette Turbo Clicker, vakandikumbira kuti ndigadzirewo chirongwa chekubheja nhamba pamwe neparutivi, inozivikanwawo se "vavakidzani".
"Vavakidzani" saka ndiwo manhamba ari pedyo kurudyi uye kuruboshwe kwe "base" nhamba yatinotarisira kubheja.
Semuenzaniso, kana tichida kubheja zero uye nhamba dzayo mbiri "dzakavakidzana", tichafanirwa kubheja panhamba 2-26-0, pahuwandu hwenhamba nhatu.
Kubheja nhamba dzepedyo kunobatsira kune avo vanofarira mutambo pane zvikamu zveiyo roulette, kazhinji muchokwadi mutambi anoda kufukidza chikamu chakakura kana chidiki cheiyo roulette uye nekutenda ku Dzvanya Kutenderera ikozvino mukana uyu uri mukati memunhu wese.
Maitiro ekugadzirisa Click Around
Dzvanya Kutenderera zviri nyore kwazvo kushandisa, zvakakwana kuti utange uye mushure mekupinda yekumisikidza kodhi, enda kune yekutanga gadziriso yetafura yemutambo, sarudzo idzo dzakanyatsofanana neidzo dzakapihwa ► Roulette Turbo Clicker.
Zvakare ne Dzvanya Kutenderera muchokwadi, ingo gonesa iyo "Spacebar Config" sarudzo yekuisa otomatiki macontinuates enhamba dzetapeti, mashandiro ayo paavhareji anotora isingasviki miniti.
Paunenge uchinge wapinda maX / Y ese maratidziro enhamba dzandinokurudzira kuti uchengetedze kumisikidzwa nebhatani rakakodzera uye tichava takagadzirira kuyedza software yeiyo roulette. Dzvanya Kutenderera patafura yegirini.
Zvakare ne Dzvanya Kutenderera pane sarudzo dzekukwanisika kubaya shoma o pashure vachibhejera zvinhu, zvakare sezvaunogona kumisikidza kumhanya kwekudzvanya nekugadzirisa sarudzo Mouse Dzvanya Speed paunoda, uchifunga kuti 0 ndiyo yekumhanyisa kumhanya uye kuti 1000 yakaenzana sekondi imwe pakati pekubaya.
Kubheja kuRoulette neKutenderedza Kutenderera
Paunenge uchinge wapedza maitiro akareruka (pa ► YouTube Zviripachena uchawana vhidhiyo yekuratidzira), unogona kubaya pane bhatani Mhanya Clicker, kuenderera kumberi chaiko.
Pano hapana zvakawanda zvekutsanangura, ingo fambisa iyo yekukodha kwaunoda pachiratidziro, kumusoro kuruboshwe iwe unowana sarudzo Vavakidzani, nekuda kwekuti iwe unogona kusarudza mangani "vavakidzani" kubheja kuwedzera kune iyo base nhamba, kana zvirizvo iwe uchida kubheja iyo nhamba 5 uye mbiri mbiri, ndiko kuti, huwandu hwenhamba shanu, ingosarudza 5 mune Vavakidzani bhokisi uye tinya pane green denderedzwa inoenderana 2.
Mune ino kesi, huwandu hwenhamba shanu hunenge huchave kubheja, ndiyo nhamba yepasi uye vaviri vavakidzani kurudyi uye vavakidzani vaviri kuruboshwe.
Pamusoro kurudyi uchawana sarudzo Units, ndiwo mangani mayuniti ekubheja pane imwe neimwe nhamba.
Ndingati hapana chimwe chekuwedzera, ichi chimwe chezvirongwa zvekare zvinoita basa razvo pasina matambudziko akawandisa uye izvo zviri pachena kuti hazvishandisike kune avo vanogadzira zano rekubheja maringe nematanho eroulette.
Dzvanya Kutenderera iyo inokutendera iwe kubheja yakakwira yeiyo base nhamba uye yayo 18 padivi kuruboshwe uye 18 kurudyi, saka zvakare inovhara iyo yese denderedzwa yeiyo roulette vhiri.
Nakidzwa uye usakanganwa kunyorera kuTeregiramu chiteshi kana iwe uchida kuongorora dzese nhau kana kugamuchira imwe yakasarudzika bhonasi yakachengeterwa nhengo.
File Download	CAround.zip - 2 MB
Download 4971 Downloads